Zvinyorwa zveBreena Fain pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Breena Fain
Breena Fain ndiye PR & Kushambadzira Nyanzvi paFormstack, inovaka fomu repamhepo iro rave mutungamiri mukugadzira, kubata, uye kubata mafomu epamhepo. Formstack inopa mabhizinesi emhando dzese uye saizi iri nyore-kushandisa fomu yekuvaka chishandiso kuunganidza nyore uye kubata data. Vashandisi vanogona kupinza mafomu zvakananga muwebhusaiti yavo kuti vakurumidze kutungamira kubatwa. Rudzi urwu rwekushomeka kunoita kuti masangano, kunyanya mabhizinesi madiki, aite nyore kushambadzira kwayo nekuwedzera zviwanikwa.
Chipiri, July 17, 2012 Chipiri, July 17, 2012 Breena Fain
Mazhinji emakambani anoona tsika yavo pamwero mukuru, achifukidza sangano rese. Nekudaro, zvakakosha kuti ushandise tsika yakatsanangurwa nesangano kune ese mashandiro emukati, kusanganisira yako timu yekutengesa. Kwete chete iyo inoenderana nemaitiro ako nezvinangwa zvese zvekambani yako, asi inoisa muyero wemamwe madhipatimendi kutevedzera. Hedzino nzira shomanene marongero ako ekushambadzira anogona kuratidza tsika dzesangano rako: